Ukuthengisa Nge-imeyili Okuphumayo Kungayisekela Kanjani Imigomo Yakho Yokumaketha | Martech Zone
Ukuthengisa Nge-imeyili Okuphumayo Kungayisekela Kanjani Imigomo Yakho Yokumaketha
NgoLwesibili, ngo-Mashi 13, i-2018 U-Ian Cleary
Ukumaketha okungakahleleki mkhulu.
Ushayela ithrafikhi kuwebhusayithi yakho.
Uguqula enye yaleyo thrafikhi uthengise imikhiqizo nezinsizakalo zakho.
Iqiniso ukuthi kunzima kunanini ngaphambili ukuthola imiphumela yekhasi lokuqala le-Google nokushayela ithrafikhi ephilayo.
marketing Okuqukethwe sekuya ngokuncintisana okukhulu.
Ukufinyelela okungokwemvelo eziteshini zemithombo yezokuxhumana kuyaqhubeka nokwehla.
Ngakho-ke uma nawe uqaphele ukuthi ukumaketha okungenayo akusenele, kuzodingeka ukuthi ukukunike leyo push eyengeziwe ukuthola imiphumela oyilandelayo.
Futhi kulapho ukumaketha kwe-imeyili okuphumayo kungena khona.
Ukumaketha Kwe-imeyili Okuphumayo
Ukumaketha kwe-imeyili okuphumayo kumayelana nokufinyelela kuhlu lwabantu ababhekiswe kakhulu abangasiza ngebhizinisi lakho.
Akuyona i-imeyili yakho ejwayelekile ebandayo lapho uvulela khona umyalezo ofanayo ezinkulungwaneni zabantu. Kuyinkimbinkimbi kakhulu futhi kunamasu kunalokho.
Ngamasu namathuluzi afanele, ukumaketha kwe-imeyili okuphumayo kungasebenza kakhulu ekwandiseni ukubonakala komkhiqizo wakho nokwenza imikhombandlela yebhizinisi lakho.
Usebenzisa ithuluzi, njenge I-OutreachPlus, eyenzelwe ngqo ukufinyelela i-imeyili izokuvumela ukuthi uthumele ama-imeyili enziwe waba ngewakho kubabukeli abancane, usethe ukulandelana kokulandelela, ulandelele konke ukuxhumana namathemba akho, ulinganise imiphumela yemikhankaso yakho, nokuningi.
Ideshibhodi ikunikeza ukubuka konke okuphezulu kokusebenza
Bhalisela Isivivinyo Samahhala se-OutreachPlus 14
Manje, ake sibheke amanye amaqhinga asebenza kakhulu ongawasebenzisa ukumaketha ibhizinisi lakho usebenzisa ithuluzi lokufinyelela i-imeyili.
Yakha izixhumanisi ukwandisa ithrafikhi.
Imikhankaso yokwakha izixhumanisi isebenza ezinhlangothini ezimbili - zikusiza ukwakha iphrofayili yokuxhumanisa ebaluleke kakhulu kwi-SEO, futhi ziletha ithrafikhi esezingeni eliphakeme kuwebhusayithi yakho.
Kepha, ukuthola lezi zinzuzo udinga ukuthola amathuba wokwakha izixhumanisi afanele, okugunyazayo, amasayithi asezingeni eliphakeme ahlobene kakhulu nesihloko sakho bese uwafinyelela.
Kunamaqhinga amaningi wokwakha izixhumanisi, kepha nansi ambalwa asebenza kahle kakhulu:
Izixhumanisi zokuncoma - Thola izindatshana zokuncoma kumasayithi ahlobene nezixhumanisi zokushintshana.
Izixhumanisi eziphukile - Thola izixhumanisi eziphukile kumasayithi anegunya eliphezulu usebenzisa ithuluzi elifana nelithi Ama-Ahrefs futhi uxhumane nabo ukunikela ngesixhumanisi esizongena esikhundleni.
Izixhumanisi zamakhasi ezinsizakusebenza - Thola amakhasi wezinsizakusebenza afanele bese ufinyelela ukunikela ngemithombo yekhwalithi ezokwengeza inani futhi ilingane kahle nezinye izinsiza ezikulelo khasi.
Ukwakhiwa kwesixhumanisi kungadla isikhathi, kodwa kubaluleke kakhulu, ngakho-ke udinga ukuhlela ngokufinyelela kwakho.
Khulisa ukufinyelela kokuqukethwe kwakho okuhle kakhulu.
Ukufinyelela i-imeyili kuyindlela efakazelwe, esebenzayo kakhulu yokushayela ithrafikhi nokuzibandakanya kokuqukethwe kwakho.
Ungakwazi ukufinyelela kubathonya embonini yakho, amabhulogi ahlobene, noma ngisho nabalingani bebhizinisi ababukeli babo abangaba nentshisekelo esihlokweni sakho. Uma nje okuqukethwe kwakho kubaluleke kakhulu, ukukukhuthaza ngokufinyelela kuzonweba ukufinyelela kwakho futhi kungahle kulethe imikhondo emisha yebhizinisi lakho.
Kunoma ikuphi, udinga ukuthi ube ne- isu elihle lokukhuthaza okuqukethwe kwakho.
Sebenzisa abagqugquzeli ukwakha umkhiqizo wakho.
Ukumaketha komthelela kungasebenza ngempumelelo emangalisayo. Eqinisweni, omunye umbiko uthole ukuthi i- njalo ngama- $ 1 owachitha ekukhangiseni abanethonya uthola ama- $ 6.50 emuva.
Okokuqala, kuzodingeka wenze uhlu lwabathonya olufanele ku-niche yakho nomkhankaso owusebenzisayo, ube nekhono lokushayela izilaleli zabo esenzweni, futhi ulungele uhlobo lomkhiqizo wakho. Ungakwazi kalula thola abagqugquzeli abafanele ngeGroupHigh.
Ngemuva kwalokho ungalayisha uhlu lwakho ithuluzi lokufinyelela bese uqala ukwakha umkhankaso wakho. Vele uqiniseke ukuthi wenze ngezifiso ama-imeyili akho kumuntu ngamunye onomthelela ngamunye ukukhulisa amathuba akho okuthola impendulo.
Amathuluzi wokuthengisa we-imeyili aphumayo alungele ukuphatha inqubo yokufinyelela, kepha abaluleke kakhulu ekugcineni umunwe wakho ekushayeleni kobudlelwano bakho nabathonya njengoba bekhula.
Khulisa ukuvezwa ngokusebenzisa ukufinyelela kwabezindaba.
Ukufinyelela kwabezindaba kuyindlela engambi eqolo yokukhiqiza ukuvezwa nokubonakala komkhiqizo wakho okudingeka ukhule. Ukukhulunywa ngamasayithi wemithombo yeziphathimandla kukunika ukwethembeka komuntu wesithathu futhi kuhambise ithrafikhi eqondile kuwebhusayithi yakho.
Kepha… Udinga ukukhomba abahleli abalungile, intatheli, nama-blogger, abantu abangaba nentshisekelo endabeni oyishayayo. Futhi lokhu kusibuyisela emuva ekubalulekeni kokuba nohlu oluhlosiwe kakhulu loxhumana nabo.
Funa abantu asebevele bahlanganisa izindaba ezifanayo kepha qiniseka ukuthi lokhu okuphosayo kune-engeli ethandekayo nehlukile.
Ungakha umkhankaso we-PR ku:
Nyusa umkhiqizo / isici / isevisi yakho yakamuva
Hlela umbono wendaba
Nikela ngokunikela ngemininingwane kuma-athikili azayo
Njengoba izintatheli nabahleli bangabantu abamatasa ngokweqile, cishe kuzofanele ubekezele futhi uthumele ama-imeyili okulandelela.
Ukuba nethuluzi elingenza inqubo yokulandelela isebenze futhi iqalise ama-imeyili enziwe ngezifiso ngokususelwa kuzenzo zabamukeli kuzoba isikhathi esikhulu. Futhi, awusoze ulahlekelwe ithrekhi yama-imeyili noma oxhumana nabo abalulekile bemidiya.
Ukumaketha kwe-imeyili okuphumayo (okusho ukufinyelela nge-imeyili) kungasekela isu lakho elingenayo futhi kube nomthelela omkhulu ezinhlosweni zakho zokumaketha jikelele.
Uma ungakabikho, amaqhinga ama-4 esikhulume ngawo kule ndatshana ayindawo efanelekile yokuqala ngohlelo lwakho lokufinyelela. Mane uzihlomise ngethuluzi lokufinyelela ukuze wenze i-automate, ibe lula, futhi isheshise inqubo futhi uzobe usulungile!
Tags: ukufinyelela i-imeyilibandlaukumaketha kwamathonyai-imeyili ephumayoinsimuisu lokukhuthaza
U-Ian uyi-CEO ye I-RazorSocial futhi unikele ngempilo yakhe yokusebenza ekusizeni ukuthola amathuluzi amahle kakhulu nobuchwepheshe bezokuxhumana. U-Ian ukhuluma njalo emicimbini (ikakhulukazi e-US), futhi ubhalela amabhulogi amaningi ezokuxhumana.
Amasu Wamasosha "Wempi Yezempi" ayindlela elandelayo yokubamba iMakethe
Kushubile kunokushisa: Sethula iresiphi entsha yeSecret Sauce Yezokumaketha ku-LinkedIn